Resaky ny mpitsimpona akotry : Ôktôbra, volana manan-danja | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : Ôktôbra, volana manan-danja
Fisokafan’ny taom-pianarana, ho an’ny fianakaviana maro midika fahasahiranana miaro fitaintainan’ny ankizy. Ao ny falifaly tsidrin-daona ho any an-tsekoly. Ao ihany koa ireo malailay, mihisatra noho ny fanavaozana na noho ny tsy fahampian’ny fitaovana.
Rehefa mandingana an’ity volana ity dia efa roboka ao anatin’ny fotoanan’ny maitso ahitra, tsy fahampian’ny vokatry ny tany mitarika fidanganam-bidy. Efa nahatonga vary avy any ivelany hitsinjovana ny filan’ny mponina. Eo amin’ ity sehatra ity tsy fantatra ny tena antony manakana ny firenena hahaleo tena mikasika ny famokaram-bary ahafahana mahenika ny filàna manerana ny Nosy.
Izay iray miakatra eo amin’ny fitondrana dia tsy mandingana ny fanomezana toky, milaza fahaizana hitondra fiovana eo amin’izany tsy fahaleovantena izany. Vahiny indray ve no afarana homena tany hambolena ? Eto an-toerana anefa no itoeran’ny vahaolana ! Tsy ny tany afaka anaovana fambolena no tsy misy, tsy ny olona tsy manan-katao no tsy ampy. Fandaminana pôlitika no ilaina. Vitsy angamba no havanana amin’izay. Fanaovana adilahy pôlitika no ifaninanana ampisehoana fahaizana.
Ity volana ity ihany koa no ahitana ny voka-dratsy ateraky ny doro tanety sy ny doro ala. Rakotry ny setroka ny habakabaka. Takona ambamin’ny masoandro matetika raha vao tolatolaka ny andro, manempotra hatramin’ny rivotra iainana. Tsy atao resaka intsony ny fahasimban’ny tontolo, toy ny eo amin’ny fifehezana ny sehatra ahafahan’ny mponina maneho ny heviny, toy ny vokatry ny tsy fahaizana mifehy ny fandriampahalemane. Eo amin’ny lafiny rehetra, mitombo isan-taona ny “faritra mena”.
Malaza manan-karena ity Nosy ity. Fantatra koa anefa fa tafiditra anisan’ny lohalaharana eran-tany ny mponina raha ny fianjadian’ny fahantrana no resahina. Tsy afa-bela amin’ io seho sy tranga mifanipaka io (tany mifono harena, mponina totofan’ny fahantrana) ny rehetra nikasika fitondrana sy izay niray dia na tetika tamin’ny mpitondra.
Volana ôktôbra toy izao raha miherina ny taona, miomankomana hifidy filoha ny vahoaka. Raha toa moa mangataka ny fanohizany ny asa eo amin’ny toerana misy azy ny Filoha ankehitriny dia manakaiky ny famaranany ny fe-potoana voalohany. Araky ny lalàna velona dia miataka mametra-pialàna mba tsy hiavahany zo amin’ny mpifaninana aminy. Asa anefa, mety hisy fanovana izany noho ilay tetika naroso. Rava eo ny fitovizan-jon’ny mpifaninana : tsy mikatroka dia efa mipetraka ho voanjo-manga ny iray, ny sisa mbola tsy miady dia efa voailika ho tanalahy.